KAMIAOBE NIFANDONA TANY AMIN’NY RN2 : Iray namoy ny ainy, nitohana tanteraka ny fifamoivoizana
Lozam-pifamoivoizana nahafatesan’olona indray no niseho tany Ranomafana , lalam-pirenena faharoa, mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina ny sabotsy 17 aogositra 2019 lasa teo. 19 août 2019
Kamiaobe anankiroa samy nitondra kaontenera no nifandona tamin’io fotoana io izay tao anaty fiolanana, alohan’ny hidirana ny tanànan’i Ranomafana . Vokany, namoy ny ainy ny mpamily iray raha naratra mafy kosa ny iray hafa raha toa ka miisa efatra izy ireo no niharam-boina. Raha ny loharanom-baovao voaray hatrany dia niteraka fitohanan’ny fifamoivoizana ny loza nitranga satria dia nibahana ny arabe ireo kamiao anankiroa ireo.
Tsy nisy afaka nandeha avokoa ireo fiara kely sy fiara taksiborosy hafa nandritra ny ora maromaro. Araka ny fanazavana voaray avy amin’ireo mpampiasa lalana mivezivezy amin’iny toerana iny dia nanambara izy ireo fa tsy vao izao akory no nisehoana lozam-piarakodia io lalana io fa efa matetika loatra noho ny fahabetsahan’ireo lalana miolakolana sy teritery.
Tokony hisy araka izany ny fametrahana takelaka famantarana ireo toerana mety hampidi-doza mba ho fisorohana avy hatrany. Etsy andanin’izay ny fahamailoan’ny mpamily hatrany amin’ny fanajana ny hafainganam-pandeha sy ireo lalana mifehy ny fifamoivoizana.
FISOROHANA ACCIDENTS AMIN’NY RN2
2019-08-20 09:27:20 par Leon
Izao no sosokevitra avy aty amiko mba hisorohana accident amin’ireny tournants ireny. Tokony asiana fitaratra (rétroviseurs) ahitana na hoan’ny fiara miakatra n’a midina fa misy avy dia samy mitandrina amin’izay.Dia ny fiara midina mijanona miandry ny fiara miakatra.
Zotra amina lalam-pirenena miisa fito no niverina amin’ny laoniny FITATERANA AN-TANETY (236) 16 septembre 2020 Vazaha iray voatifitra, voaroba ny vola tamina kitapo NIREFOTRA NY BASY TANY TOLIARA (191) 16 septembre 2020 Lehilahy tra-tehaky ny Polisy teo am-pandrobana fiara ANTSAHAMANITRA (130) 16 septembre 2020 Iray volana vao hita ilay zazavavy varira 12 taona FAKANA AN-KERINY (122) 18 septembre 2020 Rarahan’ny jiolahy fampatoriana ny sakafon’ireo olona horobaina SAMBAVA (121) 18 septembre 2020 Olona marary saina nianika “pylone” nitondra herinaratra ANOSIZATO (116) 16 septembre 2020